Department for International Development (DIFD) အဖွဲ့မှ Parliamentary Under-Secretary of State for international Development ဖြစ်သူ H.E. Ms. Baroness Sugg CBE နှင့် အဖွဲ့အား ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးလက်ခံတွေ့ဆုံ
နေပြည်တော်၊ (၂၀၁၉) ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၅) ရက်နေ့
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးသည် အောက်တိုဘာလ (၂) ရက်နေ့၊ နေ့လယ်ပိုင်းတွင် Department for International Development (DIFD) အဖွဲ့မှ Parliamentary Under-Secretary of State for international Development ဖြစ်သူ H.E. Ms. Baroness Sugg CBE နှင့် အဖွဲ့အား ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၄)၊ နေပြည်တော်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် Department for International Development (DIFD) အဖွဲ့မှ Parliamentary Under-Secretary of State for international Development ဖြစ်သူ H.E. Ms. Baroness Sugg နှင့် အဖွဲ့က -
• မိမိတို့အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ အသိုက်အဝန်းအားလုံးအတွက် Department for International Development (DIFD) အဖွဲ့မှ အထောက်အပံ့ပေးနိုင်မည့်အခြေအနေများကို သိရှိနိုင်ရန် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ခရီးစဉ် လာရောက်ခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း၊
• UK Aid အစီအစဉ်ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော လုပ်ငန်းများ၏ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု အခြေအနေများကို နားလည်သိရှိရန်အတွက် ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ယာယီကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများသို့ သွားရောက်ခဲ့ ပါကြောင်း၊ စစ်တွေပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသို့လည်း သွားရောက်ခဲ့ပြီး ဆေးပညာကျင့်ဝတ်များနှင့်အညီ ခွဲခြားမှုမရှိ ကုသပေးနေမှုအခြေအနေများ၊ ဆေးရုံကြီး ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် Master Plan ရေးဆွဲ ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများကို လေ့လာခွင့်ရခဲ့ပါကြောင်း၊
• Department for International Development (DIFD) အနေဖြင့် ကျန်းမာရေးကဏ္ဍလုပ်ငန်းများအတွက် ဆက်လက် ပံ့ပိုးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
• ဝန်ကြီးဌာနမှ ဆောင်ရွက်နေသော လုပ်ငန်းများနှင့် ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားမည့် လုပ်ငန်းများ (patient safety, health promoting school programs, promoting health literacy level of the population, utilizing the services of basic health service professionals effectively and efficiently, preventing and controlling non-communicable diseases together with initiation of preventive cardiology programs, promoting research culture and conducting implementation research to improve program performance, management and administrative challenges together with utilization of research findings, making health information system dynamic and responsive, completing housing complexes of health staff in time, making the most out of using the tablet phones from clinical and public health perspectives) နှင့် ပတ်သက်၍ ပြောကြားခဲ့ပြီး
• Department for International Development (DIFD) အနေဖြင့် Access to Health Fund မှ တဆင့် တိုင်းရင်းသားကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းများကို ပံ့ပိုးမှုများသည် ကောင်းမွန်ပါကြောင်း၊
• ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များတွင် တိုင်းရင်းသားကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း၍ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး တိုင်းရင်းသားကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းများအတွက် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့် တင်မှုလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊
• Department for International Development (DIFD) မှ တဆင့်ခံပေးအပ်သော Global Fund ရန်ပုံငွေများဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ခုခံကျ/ကာလသား၊ တီဘီနှင့် ငှက်ဖျားရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းများ၏ အောင်မြင်မှု များကို နိုင်ငံတကာမှ အသိအမှတ်ပြုလျက်ရှိပါကြောင်း၊
• ထို့အပြင် Gavi ၏ အထောက်အပံ့ဖြင့် တိုးချဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးလုပ်ငန်းများကိုလည်း အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ ပါကြောင်း၊
• Department for International Development (DIFD) အနေဖြင့် ကျန်းမာရေးကဏ္ဍလုပ်ငန်းများအတွက် ဆက်လက် ပံ့ပိုးသွားမည်ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဒေါက်တာသာထွန်းကျော်၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (ကုသရေး) ဒေါက်တာသီတာလှ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး (ကုသ/ ကာကွယ်/ ဆေးခုံ) ဒေါက်တာမိုးခိုင်၊ British Ambassador to Myanmar Mr. Dan Chugg၊ Head of UK aid/ DFID Myanmar Mr. Rurik Marsden၊ Deputy Head of UK aid/ DFID Myanmar Ms. Becky Richards နှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
Author: MOHSAdmin3 Last modified on Saturday, 05 Oct 2019